China Enameled Cast birta cagaarka ah / warshadda kiliyaha shaaha madow iyo soo saarayaasha |Forrest
Nooca Alaabta Cabbitaannada:
Dheriga Biyaha & Kiliga
dhaldhalaalka gudaha iyo rinjiyeynta dibadda
kiliyaha birta tuura
Hababka Cabitaanka Pitchers
Logo la habeeyey
Ku shub birta dheriga shaaha cagaaran/madow
Nadiifinta Dhallaankaga Birta ah
uU ogolow alaabta wax lagu kariyo inay qaboojiso ka hor intaadan dhaqin.
uGacmaha ku dhaq biyo diirran oo saabuun leh si aad u ilaaliso muuqashadii asalka ahayd ee alaabta wax lagu karsado.
uIsla markiiba qalaji weelka cuntada lagu kariyo.
uKaliya isticmaal caag ama naylon suufyada wax lagu xoqo si aad isaga ilaaliso waxyeelada dhaldhalaalka.
uWasaqda joogtada ah, ku qooy gudaha weelka wax lagu kariyo 2 ilaa 3 saacadood
uSi aad meesha uga saarto wax kasta oo lagu dubay haraaga cuntada, kari isku dar ah 1 koob oo biyo ah iyo 2 qaado oo baking soda ah oo ku dhex jira weelka cuntada lagu kariyo.
uHoos ha u kicin daboolka dheriga, taas macnaheedu waa daahan dhaldhalaalka ah si toos ah uma taaban karo midba midka kale, taas oo keeni doonta xoqin dusha sare ah.
S: Waa maxay MOQ gaaga?
A: Sida caadiga ah MOQ our waa 500 pcs.Laakiin waxaanu aqbalnaa tiro ka yar dalabkaaga tijaabada ah.Fadlan xor u noqo inaad noo sheegto inta qaybood ee aad u baahan tahay, waxaanu xisaabin doonaa kharashka si isku mid ah, adigoo rajaynaya inaad dalban karto dalabyo waaweyn ka dib markaad hubiso tayada alaabtayada oo aad ogaato adeeggayaga.
S: Ma heli karaa muunado?
J: Hubaal.Sida caadiga ah waxaan ku bixinaa muunad ka bixitaan bilaash ah.Laakiin wax yar oo muunad ah oo loogu talagalay naqshadaha gaarka ah.Kharashka tusaalaha waa la soo celin karaa marka dalabku gaadho tiro go'an.Caadi ahaan waxaan u dirnaa muunado FEDEX, UPS, TNT ama DHL.Haddii aad leedahay xisaab side, way fiicnaan doontaa in lagu soo raro akoonkaaga, haddii kale, waxaad bixin kartaa kharashka xamuulka ee papal-kayaga, waxaanu ku soo rari doonaa akoonkeena.Waxay qaadataa qiyaastii 2-4 maalmood in la gaaro.
S: Intee in le'eg ayay tahay wakhtiga sambalka?
J: Shaybaarada jira, waxay qaadataa 2-3 maalmood.Waa xor.Haddii aad rabto naqshadahaaga, waxay qaadanaysaa 5-7 maalmood, iyadoo ku xiran adiga naqshadeynta haddii ay u baahan yihiin shaashad daabacaad cusub, iwm.
S: Intee ayay le'eg tahay wakhtiga hogaaminta wax soo saarka?
J: Waxay qaadataa 30 maalmood MOQ.Waxaan leenahay awood wax soo saar ballaaran, kaas oo hubin kara wakhtiga dhalmada degdega ah xitaa tiro badan.
S: Waa maxay qaabka faylka aad u baahan tahay haddii aan rabo naqshadeyda?
J: Waxaan guriga ku leenahay naqshadeeye noo gaar ah.Markaa waxaad bixin kartaa JPG, AI, cdr ama PDF, iwm. Waxaanu samayn doonaa sawir 3D ah oo loogu talagalay caaryada ama shaashadda daabacaadda xaqiijintaada ugu dambeysa ee ku saleysan farsamada.
S: Immisa midab ayaa diyaar ah?
A: Waxaan u dhignaa midabada leh Pantone Matching System.Markaa waxaad noo sheegi kartaa koodka midabka Pantone ee aad u baahan tahay.Waxaan u dhigmi doonaa midabada.Ama waxaan kugula talineynaa midabyo caan ah.
Q: shahaado noocee ah ayaad heli lahayd?
J: Muddadayada lacag bixinta caadiga ah waa TT 30% dhigaal ka dib markii la saxeexay iyo 70% ka dhanka ah nuqulka B/L.Waxaan sidoo kale aqbalnaa LC marka la eego.
Baakaynta & Rarista
1) Xidhidhiyaha Cast Iron Teapot:
-Waxaa diraya, sidaDHL, UPS, FEDEX,iwm. Waa albaab ilaa doo, badanaa3-4 maalmoodinuu yimaado.
-Hawo ahaandekedda hawada, sida caadiga ah5-7 maalmoodinuu yimaado.
-Dhanka baddadekedda badda, uaually15-30 maalmoodinuu yimaado.
Haddii wakhtiga dhalmadaadu tahay mid degdeg ah, waxaanu kuu soo jeedinaynaa inaad doorato warqaadayaal ama hawo.
Haddii kale, waxaan kugula talineynaa badda, aad bay u jaban tahay.
1.24 saacadood adeegga khadka.
2. Adeegga iibinta ka hor iyo iibka ka dib ee ugu wanaagsan.
3. 50 maalmood ka dib markii la helo shixnadda deebaajiga.
4. Waxaan kuu dooran doonaa shirkadda maraakiibta oo leh adeeg wanaagsan iyo qiimo jaban adiga.
Hore: Dhaldhalaalka Jabbaan ee kabka shaaha birta ah 0.8L
Xiga: 0.3L Jumlo Eurofins waxay oggolaatay dhaldhalaalka midab gaar ah ee tetsubin
Mashiinnada kabka ee hore loo sii diyaariyay
Gacanta la Laabi karo Wareegga Dhexroorka 24 iyo 27cm Pres...
Shooladda dheriga shaaha ee birta la qaadan karo oo cagaar ah
Jumlada Cast Birta Birta Shiineeska Kettle Wareejinta
Dhaldhalaalka weelka shaaha lagu cabbo oo leh Stee aan lahayn...
Digsi kulul oo birta lagu shiilayo lehna gacan dheer oo wareeg ah...